Labsiin yeroo muddamaa mirgoota hedduu daangesse: Hiiyuman Raayits waach - BBC News Afaan Oromoo
Labsiin yeroo muddamaa mirgoota hedduu daangesse: Hiiyuman Raayits waach
Erga labsamee torbee tokkoo ol kan ta'e labsiin yeroo muddamaa hiree sochiin siyaasaa nagaan biyyattii keessatti qabu daranuu daangessuu akka danda'u Hiiyuman Raayits waach gabaasa isaan addeesseera.
Mootummaan labsii mirgoota sadarkaa idil addunyaatti eegumsi godhamuuf akka yaada ofii bilisaan ibsachuu fi mirga walitti qabamuu dhoorku kana atattamaan akka hambisu ykn ammoo fooya'iinsa akka iraatti taasisu gaafateera.
Dhaabbatichi Labsii yeroo muddamaa waggaa tokko dura labsamee fi ji'oota kudhaniif ture keessatti, mootummaan namoota kuma 20 ol hidhuu fi sarbamiinsa mirga namoomaa hedduu raawwachuusaa eereera.
Labsiin kun barreefamootaa fi odeeffannoolee labsii kana qeeqan dhorkuun dabalatatti, qaama raawwii labsii kanaa hordofu, sekreeteriyaatii Komaand poostiif aangoo dhaabbilee sabaa himaa cufuu isa dandeesisu kenneefi jira.
Kunis Sabaa himaalee biyyattii keessa jiraniifi itti fayyadama miidiyaalee hawaasummaa cimaa dhufe irratti yaaddoo uumeera jedha gabaasni dhaabbatichaa.
Akka gabaasa dhaabbatichaatti jechoonni Labsii kana keessatti hojiiirra oolan hiika garaa garaa itti kennuuf banaa ta'uun isaanii mootummaan ejjennoo itti tole fudhachuu akka danda'uuf haala mijaawaa uumaaf.
Jechoonni akka 'qaamolee farra nageenyaa wajjin wal qunnamuun', 'warreen wal danda'uu fi tokkumaa jeeqan' fi kanneen biroon hiikni isaanii inni sirriin hin barreeffamne kunis sarbamiinsa mirgootaaf karaa saaqa jedha Hiiyuman Raayits waach.
Gabaasichi haala siyaasaa mootummaan gaaffilee itti dhiyaatan humnaan deebisu keessatti, jechoonni hiika walfalmisiisaa akka kanaa jiraachuun humnoota nageenyaa biyyattiif aangoo daangaa hin qabne kennas jedha.
Qamni labsichaa rakkoo guddaa qabu inni biroon, qaamoleen nageenyaa jeequmsa dhaabsisuuf hayyama eenyuunuu ala dhaabbilee barnootaa seenuu fi hidhuu akka danda'an isa eeruudha jedha Hiiyuman Raayits waach.
Keewwatni kun qaamolee nageenyaaf aangoo hayyama eenyuuniyyuu ala manneen jireenyaa sakkata'uu danda'an kennaf. Dabalataanis duula mana ooluu, manneen daldalaa cufuu, daandii cufuufi moormii karaa nagaa kamuu ni dhorka.
Namni Labsii kana sarbe kamuu ajaja koomaand poostiin ala hidhamuu danda'a. Leenjii haaromsaa akka fudhatus taasifama.
Dararaafii seeraan ala nama hidhuun Itoophiyaatti rakkoo guddaa akka ta'es Hiiyuman Raayits waach gabaasa isaa kanaan eereera.